देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा जनताले अत्याचार सहनुपर्ने छैन : मीन विश्वकर्मा (अन्तरवार्ता) - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७८, बुधबार १० : ००
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुख बने। उनले साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत समेत पाइसकेका छन्। तर, देउवाले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। असार २९ गते आफूसँगै मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण (गृहमन्त्री), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री), माओवादीबाट जनार्दन शर्मा (अर्थमन्त्री) र पम्फा भुसाल (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री) लाई समेटेका देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई कहिले पूर्णता दिन्छन्? किन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ? यीनै विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री देउवानिकट मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मीन विश्वकर्मासँग कुराकानी गरेका छौं :
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत समेत पाइसक्नुभएको छ। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिएको थियो तर, किन ढिलाई?
मन्त्री बनाउने कुरामा कांग्रेसको तर्फबाट नेताहरुका बीचमा छलफल भइराखेको छ। पार्टीभित्र एकखालको टुंगो पनि लागिसकेको छ। बाँकी अन्य सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरु तर्फबाट को को कसलाई कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा अन्तिम अन्तिममा पुगिसकेको छ। अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।
आफूलाई विश्वासको मत दिने जसपा र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षबाट पनि मन्त्री थप्ने विषयमा प्रधानन्त्री देउवाले प्रयास थाल्नुभएको हो?
प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरुले चाहेको खण्डमा उहाँहरुलाई जुनसुकै बेला हामी सरकारमा सहभागी गराउन सक्छौं। तर, केही राजनीतिक दलहरु जस्तो नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको केही केही समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न केही समय हामीलाई लाग्छ केही समय हामीलाई पर्खनुस् भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ। त्यसकारण अहिलेलाई उहाँहरुलाई पर्खिन्छौं र बाँकी रहेका दलहरुलाई समावेश गरेर अघि बढ्छौं।
उहाँहरुलाई पर्खिँदा धेरै समय लाग्ने र सानो आकारको क्याबिनेट हुँदा सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नहोला नि त?
उहाँहरुलाई धेरै पर्खिनुपर्ने पनि छैन। र, अर्को कुरा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुले राज्यले दैनिक गर्नुपर्ने काम गर्नुहुन्छ। राज्यले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने काम अगाडि बढ्छ नै। केही दिन उहाँहरुलाई (नेपाल समूह) आन्तरिक समस्या समाधान गर्नका लागि समय दिइएको छ। त्यो छिट्टै समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।
उसो भए एमाले र जसपाभित्रको विवादका कारण सरकार विस्तारमा समस्या भएको होइन कि, केही समय पर्खेको मात्रै हो?
प्रधामन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कुरामा त जसपाभित्र त विवादै छैन। सबैले एकमतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभएको छ। समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँहरुको हकमा मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय मात्र अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी हो। त्यसबाहेक अरु समस्या छैन। मात्रै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको केही प्राविधिक कुरा रहेको छ। त्यो पनि उहाँहरुलो चाँडै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। र, त्यसपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछ।
कांग्रेसभित्र पनि सरकारमा जानका लागि धेरै आकांक्षी देखिएका छन्। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ भनिन्छ नि?
कांग्रेस महाधिवेशनको मुखमा छ। त्यसैपनि मन्त्री पद खै किन हो सबैले धेरै आकर्षक ठान्नुहुन्छ। राजनीतिमा लागेपछि मन्त्री हुन पाउने सबैको आकांक्षा हुँदो रहेछ। सांसद भएका नेताहरुले मन्त्री हुन खोज्नु अस्वभाविक पनि होइन। सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्दा नेताहरुले हाम्रा पालामा हामी मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर चाहना राख्नु पनि स्वभाविक हो। तर, यसले सरकार विस्तारमा समस्या पारेको छैन। पार्टीभित्र छलफल भएर एक किसिमको टुंगो लागिसकेको छ।
तर, अहिले कांग्रेसको एकल सरकार होइन नि त? माओवादी, जसपा र एमालेको माधव नेपाल समूहलाई समेट्नुपर्ने छ। कांग्रेसभित्रको धेरै चाहना राखेर पनि पूरा हुने अवस्था त छैन?
कांग्रेसको नेतृत्व भएपनि यो सबैको सरकार हो। एमालेका माधव नेपाल समूह आउँदा त यो झण्डै झण्डै राष्ट्रिय सरकार जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा आकांक्षा धेरैले राखेपनि सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। जसले आकांक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई पनि यो कुरा थाहा छ। यी सबै परिस्थिति बुझेर सीमित व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुनुहुनेछ नेपाली कांग्रेसबाट। ती सीमित व्यक्तिहरुका विषयमा पनि नेताहरुले छिट्टै सहमति गर्नुहुन्छ। कांग्रेसको तर्फबाट समस्या रहँदैन। विवाद हुँदैन।
तपाईंहरू अर्कोतर्फ महाधिवेशनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। पार्टी र सरकारको तालमेल कसरी मिलाउनुहुन्छ?
हामीलाई त्यस्तो समया हुन्न। यो कस्तो हुन्छ भने टुर्नामेन्टमा भाग लिने र क्लब सञ्चालन गर्ने जस्तो त हो नि। एउटा खेलाडीले क्लब पनि सञ्चालन गर्छ, टुर्नामेन्टमा भाग पनि लिन्छ। राजनीतिक दल पनि चुनावमा जस्तो परिणाम आएपनि पार्टी सञ्चालन भइराखेकै हुन्छ।
यतिबेला महाधिवेशन भएकाले अलि विशेष फोकस त्यता दिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारका काम कारबाही चल्दै जान्छन्। र, सँगसँगै अलि बढी समय दिएर, अलि बढी मिहिनेत गरेर पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्छौं। महाधिवेशनका कारण संसदमा कांग्रेसको उपस्थितिमा केही समस्या आउला तर, सरकार सञ्चालनको कुरालाई त्यति बाधा पर्दैन। किनभने सीमित व्यक्तिहरु सरकारमा जानुहुन्छ। पार्टीमा धेरै व्यक्तिहरु बाहिरै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले महाधिवेशनमा सम्पन्न गर्नका लागि मिहिनेत गर्नुहुन्छ। हामी गर्छौं। र, हामी महाधिवेशनलाई पनि भव्यताका साथ सम्पन्न गर्छौं। सरकार पनि आवश्यकता अनुसार चुस्त बनाउँदै लान्छौं।
हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा सरकारले कामै गर्न सकेन भनेर आलोचन गर्नुहुन्थ्यो। अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएको छ। के अब जनमुखि काम गर्नुहुन्छ?
हामी धेरै अलमल गर्दैछौं। मूल कुरा केपी ओलीको सरकारले काम गर्न नसक्नुको कारण समय होइन, उहाँ आफैं हो। आफैंभित्रको घमण्ड, अहम, अधिनायकवादी सोच, सर्वसत्तावादी सोच, बेइमानी, जालसाची, आफूबाहेक अरु कसैलाई नदेख्ने स्वभावले समस्या भएको हो। अहिलेका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भनेको सबैलाई मिलाएर लैजाने, सबैको कुरा सुन्ने, सहमतिबाट निर्णय गर्ने स्वभावको हुनुहुन्छ। सबैलाई चित्त बुझाएर काम गर्ने उहाँको प्रवृत्ति भएको हुनाले सरकार सञ्चालनमा अहिले कुनै समस्या हुँदैन।
जसरी केपी शर्मा ओलीले विपक्षीलाई अनुपस्थित गराएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाल्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो, विपक्षीलाई किचेर, पेलेर, थिचेर जानुपर्छ मात्र भन्नु भएन आफ्नै दलमा पनि फरक मत राख्नेलाई किच्ने, थिच्ने र पेल्ने गर्नुभयो। हाम्रो अहिलेको नेतृत्वले, सरकारले त्यसरी जाँदैन। सबैलाई मिलाउँछ। सँगसँगै पार्टीभित्र पनि सबै काम सहमतिमै हुने भएकाले हामी सौहार्दपूर्ण हिसाबले लिएर जान्छौं। पार्टीको कामले सरकारलाई अवरोध हुँदैन र सरकारको कामले महाविधेशन पनि रोकिँदैन।
तर, प्रतिनिधि सभाको आउँदो चुनाव पनि तपाईंकै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने देखियो। केपी ओलीले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्नुभएन भने त जनताले कसरी पत्याउलान्?
हामीले नयाँ गाडी कुदाएको होइन। नयाँ गाडी किनेर पहिलो दिन सिटमा बस्नुभएको हो। केपी शर्मा ओलीले नयाँ गाडी लिनुभो, प्यासेन्जर भर्नुभो र कुदाउन नजानेर ठाउँ ठाउँमा ठोक्काउँदै अन्तिममा लगेर भीरबाट खसाल्नुभो। त्यस्तो अवस्थामा भीरबाट खसेको गाडीलाई फेरि झिकेर, बाटोमा ल्याएर अनुभवी चालकलाइ चालकको सिटमा राखेका छौं। त्यसैले गन्त्वय पहिल्यै निर्दिष्ट भइसकेको थियो, पाँच वर्षको। त्यो पाँच वर्ष उहाँले पूरा गर्न सक्नुभएन।
बीचमा हामीले यसलाई कसरी ठीक ट्रयाकमा ल्याउने, कसरी दुर्घटनाबाट बचाउने भनेर अगाडि लगेको हुनाले आम नेपाली जनतालाई राम्ररी थाहा के छ भने गलत बाटोबाट जोगाएर ल्याएको गाडीलाई चलाएको हुनाले अब फेरि गलत चाहिँ नगरोस्, दुर्घटनामा नपारोस् र गन्तव्यमा पु¥याओस् भन्नेछ। हामीलाई सुविधा भन्दा पनि गन्तव्य र लक्ष्याको चिन्ता छ। हामीले बजेट बनाउन पाएनौं तर, यही बजेटभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ। अर्को सालको बजेट मात्र हाम्रो हुनेछ। त्यसकारण यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा केही तलमाथि गर्ने अवस्था रह्यो भने मात्र हो नत्र त्यही नै नीति तथा कार्यक्रमबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यति धेरै छलाङ मार्ने, जनतलाई चमत्कार देखाउने ठाउँ त्यति धेरै छैनन्। र, परिस्थिति पनि छैन।
यद्यपि, विकासको गतिलाई हामीले ठीक ढंगले अगाडि बढाउँछौं। हामी केपीले जस्तो उट्पट्याङ र अराजक ढंगबाट मुुलुकलाई भ्रष्टाचारमा डुबाउने, अनियमिततामा डुबाउने, असंवैधानिक कदममा डुबाउने, जतालाई रातदिन दुःख दिने कामबाट हामी अलग गराउनेछौं। जनतालाई सुख दिने कोशिस गर्नेछौं। भ्रष्टाचारलाई छोडेर हामी विकास कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौं, असंवैधानिक बाटो छोडेर विधिको शासन लागू गर्ने प्रयत्न गर्छौं। त्यसमा चाहिँ हामी जनतलाई ढुक्कका साथ विश्वास दिलाउन चाहन्छौं। हाम्रो कार्यकालमा जनताले अत्याचार सहनुपर्ने छैन।